Top 3 Siyaabaha kaabta iPad si Mac (Mavericks mid)
Top 3 Siyaabaha kaabta iPad on Mac
> Resource > Mac > Top 3 Siyaabaha kaabta iPad on Mac
Your iPad ku jiri kara Xoolo ah macluumaadkaaga shakhsiyeed iyo xusuus. Tani waxaa ka mid ah barnaamijyadooda, filimada, emails, bandhigyada TV oo music. Sidaa darteed waxa muhiim ah in aad gurmad iPad si Mac. Tani waxay sidoo kale waxaa muhiim ah in kiiska aad casriyeeyo aad iPad. Kuwa soo socda waa qaar ka mid ah siyaabaha aad dib kartaa ilaa aad iPad u xajiyo ammaan ah xogta shakhsi ahaaneed.
# 1. Kaabta iPad on Mac la Lugood
# 2. Kaabta iPad la iCloud
# 3. Kaabta iPad Media Faylal ay la TunesGo Wondershare (Mac)
Tallaabada ugu horreysa ee halkan waa in aad furaysto iPad ee Mac. Lugood furi doonaa si toos ah. In Lugood ee aad iPad muuqan doona hogaanka shaashadda iyo galeeysid ah in karti loo doono guddiga taas waa soo dhow dahay bidix (ma haddii ay arkaan, guji View> tusiya galeeysid ). Just guji aad iPad in guudmari qalab aad.
Furmo suuqa oo kooban ayaa ku siin doona fursad aad ku taageerto ilaa aad iPad la iCloud iyo your computer. Dooro "kombiyuutarka" ka dibna riix "Back Up Hadda". Window ee Lugood u eg yahay mid ka mid hoose iPhone 4.
Dad badan ayaa ku weydiin su'aasha ah ee sida loo raad raac iPad si Mac isticmaalaya iCloud ah. Waa hagaag halkan sida aad u samayn karaa. iCloud ka Apple waxay bixisaa habab kala duwan oo aad dib kartaa xogta iPad ku jiraan barnaamijyadooda.
Marka hore, sidoo kale si toos ah aad dib kartaa xogta, sawiro, goobaha iyo waraaqaha ka iPad in iCloud la muujinta ah ee kaabta on. Taas aawadeed waxaad u baahan tahay leeyihiin arrimo 5 ama ka dib socda.
Si gurmad aad iPad la iCloud, kaliya tagaan doorasho "Settings" ka, halkaas oo aad soo xuli doona "iCloud" iyo ka dibna "Kaydinta iyo hayaan". Markaas oo dhan inaad sameyso waa in ay simbiriirixan kaabta iCloud ay u noqon on.
Fiiro gaar ah: naafada ayaa la iCloud waa isku mid sida in Lugood, maxaa yeelay waxa aanu dabooli ma music iyo barnaamijyadooda in la soo iibsaday. Wixii barnaamijyadooda, haddana iyaga waxaad kala soo bixi karaa iyada oo iCloud ah. Music ah in la soo iibsatay iyada oo Lugood ayaa sidoo kale mar kale lagala soo bixi karaa iCloud. Geedi socodka waxaa si kastaba ha ahaatee adag ay dhacdo in aad soo iibsatay music kale oo aan ahayn ka Lugood.
Si kale in ay dib u kor files warbaahinta iPad on Mac waa iyada oo Wondershare TunesGo (Mac) . Software Tani waa arrin si fudud loo isticmaali karo oo waxtar leh in ay dib u kor music, playlist, videos, iyo sawiro, iwm ka iPad ah in Mac ah. Wondershare TunesGo (Mac), mar magacaabay Wondershare MobileGo for iOS (Mac), ayaa kala duwan oo muuqaalada. Ka dib markii qaar ka mid ah muuqaalada barnaamijkan.
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si fudud music iyo playlists wareejiyo ka iPad si toos ah aad Lugood Library on Mac ah. No nuqul oo dhibaatana ma leh;
Waxaa aad u saamaxaaya in ay gurmad music, videos, sawiro, Podcasts, Lugood U, iwm ka iPad si toos ah u gal ah ku saabsan Mac;
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku shuban wax music video iyo in aad iPad aan arrimaha incompatibility kasta;
Waxaa gebi ahaanba la jaan qaada macruufka ah 9/8/7 iyo iPad Air iyo iPad mini ugu dambeeyay ee la isha Display.
Isku day Wondershare TunesGo (Mac) si ay gurmad aad iPad on Mac hadda! Haddii aad leedahay PC Windows ah, waa in aad isku daydo Wondershare TunesGo version Windows.
Best iExplorer Alternative for iPhone, iPad & iPod
Top 10 faa'iido leh iPhoto plugins
Sidee ku cadaadisaa Videos la Mac Finder Fast iyo si fudud
Sida loo akhriyo iPhone kaabta on Mac
Sidee si ay u gudbiyaan Photos ama Pictures ka Mac in iPad ama iPad mini